Munaasabadd lagu maamuusayo maalinta Booliska Soomaaliyeed oo lagu qabanayo dalka – Hornafrik Media Network
Munaasabadd lagu maamuusayo maalinta Booliska Soomaaliyeed oo lagu qabanayo dalka
76-sano guuradii ka soo wareegatay markii la aas-aasay ciidanka booliska Soomaaliyeed oo ku beegan maanta ayaa laga xusayaa inta badan magaalooyinka waaweyn ee gobolada iyo magaalada caasimadda ah ee Muqdisho.
Munaasabadda oo qeybta ugu weyn maanta lagu dhigayo Muqdisho ayaa waxaa ka qeyb galaya mas’uuliyiin ka kala tirsan golayaasha dowladda federaalka, siyaasiyiin, saraakiil ciidan iyo madaxda ugu sareysa dalka, sida madaxweyne Farmaajo oo lagu wado inuu ka qeyb galo munaasabaddaas.
Inta ay munaasabadu socoto ayaa waxaa halkaasi dhoola tus ku soo bandhigi doona cutubyo ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliyeed.
Sidoo kale waxaa la filayaa magaalooyinka maamul goboleedyada dalka in lagu qabto xuska maalinta Ciidanka Booliska Soomaaliyeed, waxaana sanad walba 20-bisha December koonfurta iyo bartamaha dalka laga xusaa sanad guurada ciidanka booliska Soomaaliyeed.
Beesha caalamka oo amar 11 qodob ah dul-dhigtay doorashada Somalia ee 2020-ka
Axmed Madoobe oo daah-furay shir ay qeyb galeyso dowladda federaalka